Craft Sticks နှင့် Cardstock | Easy Superhero လက်မှုပညာများဖွင့်ထားသည်
ဂျဲနီရေတွင်း | | လက်မှုပညာ, ကတ်ထူပြားလက်မှုပညာ, ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာငါတို့သွားမယ် ဤရိုးရှင်းသော superhero လုပ်ပါ ယာဉ်တုတ်များနှင့်ကတ်ထူပြားများဖြင့် ၎င်းသည်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်သာမကအိမ်၌ကလေးငယ်များနှင့်ပျော်စရာအချိန်များကိုဖြုန်းရန်အရောင်များနှင့်စာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်လည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကတ်ထူပြားနှင့်သစ်သား (ကော်၊ ပူသောဆီလီကွန်စသည်) ကိုကပ်ပါ။
ငါတို့သုံးမယ့်အရောင်တွေအကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရင်ငါတို့လုပ်လိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏စူပါဟီးရိုးများ၏မျက်လုံးအတွက်မျက်နှာဖုံးကိုစတင်ရေးဆွဲပါ။ ငါတို့နှာခေါင်းလေးတစ်ခုနဲ့အပြုံးလေးတစ်ခုထည့်မယ်ငါတို့ဆွဲထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်လုံးဝန်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းနေနိုင်တယ်။ မင်းစိတ်ကြိုက်ရွေး။ မင်းကပိုထူးခြားတဲ့ထိတွေ့မှုလိုချင်ရင်မျက်နှာဖုံးကိုဆေးခြယ်ဖို့ပတ် ၀ န်းကျင်ကမျက်လုံးတစ်ချို့ထည့်နိုင်တယ်။
ငါတို့ "S" စာထည့်တယ် စူပါဟီးရိုး (သို့) ငါတို့ကြိုက်သောအက္ခရာ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စူပါဟီးရိုး (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အတိုကောက်သို့တင်ထားသောနာမည်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ငါတို့သွားမယ် အငူပြုလုပ်ရန်ကတ်ထူတြိဂံတစ်ခုကိုဖြတ်ပါမရ။ အကောင်းဆုံးကတော့တြိဂံပုံသည်ယာဉ်ချောင်းရဲ့အရှည်ထက်သေးငယ်သင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းလိုချင်ရင်အဲဒါကိုနည်းနည်းပိုကြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
နှင့်အဆင်သင့်! ဒီစူပါဟီးရိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာငါတို့သိပြီးပြီ၊ အခုငါတို့ကမင်းစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးကစားလိုက်ရုံဘဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » ယာဉ်တုတ်များနှင့်ကတ်တစ်ကတ်ဖြင့်လွယ်ကူသောစူပါဟီးရိုး
အိပ်ခန်းများအတွက် DIY အလှဆင်စိတ်ကူးများ